ल है ... सुनाउनुस है हजूरका रमाईला क्षणहरु...
i m wating your unforgetable moments.
भनेपछि पान्डाजीको प्रमेको हाफ लाइफ अली लामो परेछ। चिन्ता नगरम गुरु, हाफ लाइफ जती लामो भयो उती प्रेम टिक्छ किनकी यस्को डिके भ्यालू पनि दरै हुन्छ नि!
आगामी अंकको प्रतिक्षा शुरु गरें है मैले ।
कोशिस गर्नेछु है सकभर रोचक बनाउन । अब नन रोमान्टिक मान्छेले खासै के रमाइलो पस्किन सक्ला र! त्यहि पनि भाको र सम्झेको कुरो लेख्दिने हो, हेरौं है त कस्तो हुन्छ ।
अनि नेपालियनजी बेलाँ अर्न नपाको प्रेम ले लौरो समाउने बेलाँ के काम देला र त्यै पनि चित्त बुझाउने बाटो त हो!
ल है अर्को असाइन्मेन्टले गर्दा ढिलो भयो भन्न पाईन्न्न।